Story Line : 6.2 IMDB Power Rangers Wild Force is an American television series and the tenth season and anniversary of the Power Rangers franchise, based on the Super Sentai series Hyakujuu Sentai Gaoranger, which itself was the 25th anniversary of Super Sentai. Five teenagers are chosen by five Power Animals to become the Wild Force Rangers, to fight the evil Jinderax and Toxica along with their evil Orgs, who are led by the Master Org. Followed by Power Rangers Ninja Storm
Release On : 01/01/2002
View : 12003
ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ လက်ရှိခေတ် ၂၀၀၂ မှာ မိစ္ဆာတွေ ပြန်လည်နိုးထလာသောအခါ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကတည်းက အန်နီမေရီရန်ပေါ်မှာ အိပ်မောကြနေတဲ့ မင်းသမီးရှဲလ်လာကလည်း နိုးထ လာခဲ့ပါတယ်... သူမက လူငယ်ခြောက်ယောက်ကို စုစည်းပြီး Wild Force Power Rangers အဖွဲ့ တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်...
Power Rangers Wild Force ကိုတော့ PR ကြိုက်သူတိုင်း သိကြပါတယ်... ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ကွက် ကောင်းပြီး ဇာတ်အိမ်ခိုင်တဲ့ series တွဲတစ်ခုပါ... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းပြောရရင် အနီကောင် မရှိသေးတဲ့ ပါဝါရိန်းဂျား ၄ ယောက် တိုင်ပတ်နေရကနေ မိဘကို ရှာဖွေဖို့ တောတွင်းကနေ တက်လာတဲ့ တာဇံကောင်လေးနဲ့ ဆုံတွေ့ကြပါတော့တယ်... ခြင်္သေ့စက်ရုပ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကနေ တာဇံကောင်လေးက အနီကောင် ရိန်းဂျား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... အခြား PR တွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်က ပါဝါရိန်းဂျားတွေက အတူတကွ တပြိုင်တည်း PR ဖြစ်လာကြတာ မဟုတ်ပါဘူး... တေလာ က အရင်ဆုံး အဝါရောင် ရိန်းဂျား ဖြစ်လာပြီး အလက်ဆာက ဒုတိယ အနေနဲ့ အဖြူရောင်ရိန်းဂျား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... အဲ့နောက်မှာတော့ မက်စ်က အပြာရောင် ရိန်းဂျားဖြစ်လာပြီး ဒန်နီက အနက်ရောင်ရိန်းဂျား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... နောက်ဆုံးမှာမှ တာဇံကောင်လေး ကိုလ်းက အနီရောင် ရိန်းဂျား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... အဝါရောင်ရိန်းဂျား တေလာက ပထမဆုံး ရိန်းဂျား ဖြစ်လာသူ အလျောက် နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာသော အနီရောင် ကိုလ်း ကို ခေါင်းဆောင် အဖြစ် အတော်နဲ့ မသက်မှတ်ခဲ့ပါဘူး... ကိုလ်းက ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဖြစ်ထိုက်လား မဖြစ်ထိုက်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ...
သူတို့ ရန်သူတော်ကတော့ မာစတာအော့ (မိစ္ဆာသခင်ကြီး) ပါ... လွန်ခဲ့တော့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ က လူသားတွေနဲ့ မိစ္ဆာ(org) တွေကြား အကြီးအကျယ် စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်... မိစ္ဆာ သခင်ကြီး သေသွားခဲ့ပြီး မိစ္ဆာ အတော်များများဟာ ကျောက်ရုပ်တွေ အဖြစ် ပုန်းကွယ်နေခဲ့ကြပါတယ်... PR တွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ မိစ္ဆာသခင်ကြီးက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ က သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မိစ္ဆာကြီးရဲ့ အကြွင်းအကျန် တွေကို စားပြီး ကိုယ်ကို့ကို မိစ္ဆာသခင်ကြီး အဖြစ် ခံယူထားသူတစ်ယောက်ပါ... မိစ္ဆာသခင်ကြီးနဲ့ ကိုလ်းကြားမှာ ရှိတဲ့ ရန်ငြိုးတွေက ဘာတွေလဲ... မိစ္ဆာတွေက မိစ္ဆာသခင်ကြီးက အတုဆိုတာ သိသွားတဲ့ အခါ ဘာဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ...
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက PR တွေရဲ့ စက်ရုပ်တွေပါ... အစမှာ ခြင်္သေ့၊ စွန်ရဲ၊ ငါးမန်း၊ ကျွဲရိုင်း၊ နဲ့ ကျားဖြူ တို့ပဲ ရှိခဲ့တာပါ... နောက်ထပ် တောရိုင်းစက်ရုပ်တွေ ရဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အခန်းတွေကလည်း တကယ့်ကို ရင့်သက်ရှုမောဖွယ်အခန်းတွေပါပဲ...
ခြောက်ယောက်မြောက် ရိန်းဂျား ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်း PR Fan တွေရဲ့ အကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... လူဆိုးဘဝမှာ သောက်ရမ်းကြမ်းတဲ့ ဇန်နာကူ က PR တွေရဲ့ စက်ရုပ်အတော်များများကို သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်... လူကောင်း ဝံပုလွေ ရိန်းဂျား မဲရစ် ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း မင်းသမီး ရှဲလ်လာနဲ့ ကြား အတိတ်က နှောင်ကြိုးဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုရမှာပါ...
တကယ့် မိစ္ဆာသခင်ကြီး အစစ် ပေါ်ပေါက်လာတဲအခါ PR တွေ အနိုင်ယူနိုင်ပါ့မလား... နောက်ထပ် ထပ်ရခဲ့တဲ့ အကောင်စက်ရုပ်တွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ... PR6ယောက်ရဲ့ PR မဖြစ်ခင် သာမာန် ဘဝတွေက ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ... စတာတွေ သိရှိနိုင်ဖို့ Power Rangers Wild Force ကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ....
Episode 1 >>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Lionheart"
Episode2>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Darkness Awakening"
Episode3>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Click, Click, Zoom"
Episode4>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Never Give Up!"
Episode5>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Ancient Awakening"
Episode6>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Wishes On The Water"
Episode7>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Bear Necessities"
Episode 8 >>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Soul Searching"
Episode9>>>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Soul Bird Salvation"
Episode 10 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Curse of the Wolf"
Episode 11 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Battle of The Zords"
Episode 12 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Predazord, Awaken"
Episode 13 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Revenge of Zen-Aku"
Episode 14 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Identity Crisis"
Episode 15 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Ancient Warrior"
Episode 16 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Lone Wolf"
Episode 17 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Power Play"
Episode 18 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Secrets and Lies"
Episode 19 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Tornado Spin"
Episode 20 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Three'saCrowd"
Episode 21 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "A Father's Footsteps"
Episode 22 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Sing Song"
Episode 23 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Wings of Animaria"
Episode 24 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Reinforcements from the Future, Part I" Crossover with Time Force Rangers
Episode 25 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Reinforcements from the Future, Part II" Crossover with Time Force Rangers
Episode 26 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Master's Last Stand"
Episode 27 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Unfinished Business"
Episode 28 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Homecoming"
Episode 29 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Flute"
Episode 30 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Team Carnival"
Episode 31 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Taming of the Zords"
Episode 32 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Monitoring Earth"
Episode 33 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Soul of Humanity"
Episode 34 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Forever Red"
Episode 35 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Master's Herald, Part I"
Episode 36 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The Master's Herald, Part II"
Episode 37 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Fishing foraFriend"
Episode 38 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "Sealing the Nexus"
Episode 39 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The End of the Power Rangers, Part I"
Episode 40 >>> Mega Link >>>> One Drive Link >>>> Facebook Link "The End of the Power Rangers, Part II"
File Size: (480 MB)/1 Episode
Translated by Swam Yee, Htet Nay Bala, James Ko Ko, Moe Pyae Khin, Poe Eaint Oo Maung